Madaxwayne Farmaajo”Calanka Somaaliyeed wuxuu ka tarjumayaa Qarannimada, Gobannimada iyo wadajirka Shacbiga” | Somalia News
Imaamka Cusub oo u Amba-baxayo Xalinta Deegaanka Burdheere!!!
Imaam Daahir Imaam Maxamuud oo dhawaan loo duubay saldanada Imaamnimo ayaa ku fool leh Degmada Cadale, si uu halkaasi uga bilaabo Dib u heshiisiin ku aadan xal u helida dhibaatada Burdheere oo dhawr sanno jirsatey!!! Abaabul ku saabsan arintaas ayaa laga dareemayaa hoyga uu Magaalada Muqdisho ka degan yahay Imaam Daahir. Booqasho la xiriirta arinta Dib u heshiisiinta Burdheere waxaa maanta hoyga Imaamka ku tagay Madax uu hogaaminayay Madaxweyne Cali Mahdi, kuwaasi oo Imaamka la wadaagay tallooyin ku aadan dhamaynta arinta Burdheere!!! Lama iga inuu Imaamka cusub ku guuleysan doono nabadayntan iyo in kale, guul dhaqan ayay Imaamka cusub u noqon doontaa haddii uu ku najaxo xalinta dhibaatada Burdheere!!!
Ra’iisul Wasaare ku Xigeenka XFS iyo wafdi uu hoggaaminaayo oo Xaflad soo dhaweyn ah loogu sameeyey Kampala
Ra’iisul Wasaare Ku xigeenka magacaaban ee Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray dalka Yugandha ayaa xaflad soo dhaweyn ah loogu sameeyey Magaalada Kampala ee Dalkaasi. Munaasabadda soo dhaweynta ayaa waxaa ka qeyb galay Siyaasiyiin, Ganacsato, masuuliyiin ka tirsan Dowladda Dalkaasi iyo xubno ka socday Jaaliyadda Soomaaliyeed . Ra’iisul Wasaare ku xigeenka magacaaban ayaa ku boggaadiyey Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaas ku nool, doorka muuqda ee ay kaga jiraan horumarka iyo is-dhexgalka bulshada geeska afrika.
Xubaha Cusub ee Golaha Deegaanka Galkacyo Oo la Dhaariyay+Sawirro
27 xubnood ee golaha deegaanka dagmada galkacyo ayaa maanta loo dhaariyay xilka loo doortay iyadoo ay goob joog ka ahaayeen wasiiru dowlaha wasaarada arrimaha gudaha Galmudug Axmed Xasan Cali iyo wasiirka wasaaradaasi Cabdi Maxamed Jaamac oo iyagu la dar daarmay xubnaha la dhaarshay . Wasiiru dowlaha wasaarada Axmed Xasan Cali iyo wasiirka wasaarada arrimaha Gudaha Cabdi Maxamed Jaamac ayaa la dar daarmay inay si daacad ah u gutaan waajibaadka loo ekmaday “Waxaa la idinka baahanyahay inaay ka dhabeysaan dhaartiina isla markaan aad sidii loogu talagalay aad ugu adeegtaan bulshadiina.ayuu yiri Mudane Axmed Xasan Cali Dhinaca kale isla maanta waxaa xubnaha cusub ee golaha deegaanka maanta magaalada galkacyo uga furmay tababar aqoon kordhin ah oo la xariira qaabka doorashada taas oo ay fulinayaan Masuuliyiin ka socatay hay’adda Eisa oo ka mid ah hay’addihii doorka ku lahaa dhismaha golaha deegaanka dagmada Galkacyo ee Galmudug isla markaana ah hay’adda ka shaqeysa arrimaha dimuquraadiyada iyo doorashooyinka Qaarada afrika. Cabdullaahi Cabdoow oo ka socday hay’adda Eisa ayaana ugu horeyn ka warbixiyay tababarka iyo waxa uu ku saabsan yahay isagoona xusay in lagu baranayo qaabka doorashada labada maalmood ee uu socdo.
Bangiga Dhexe oo beeniyay warar lagu faafiyay Baraha Bulshada
Qoraal ka soo baxay Bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa lagu beeniyay warar dhowaan lagu baahiyay baraha bulshada kuwaasoo la xiriiray bangiyada dalka qaarkood. Warkan ka soo baxay bangiga dhexe ayaa lagu sheegay in aysan jirin wax dacwad ama eedayn ah oo laga soo gudbiyay bangi ka mid ah Bankiyada dalka. Waxana uu Bangiga dhexe ugu baaqay warbaahinta dalka iyo kuwa dibeddaba (gaar ahaan Baraha Bulshada), in ay ka fogaadaan faafinta xog aan xaqiiqaada ku salaysnayn. Halkan hoose ka aqriso qoraalka ka soo baxay Bangiga Dhexe; Wargelin (Press statement) Bankiga Dhexe ee Soomaaliya isaga oo ka duulaya warar been-abuur ah oo maalmihii u dambeeyay lagu baahiyay Baraha Bushada ee Soomaalida (social media), kuwaas oo looga beensheegayo Bankiyada dalka qaarkood, haddaba Bankiga Dhexe wuxuu guud ahaan dadweynaha iyo gaar ahaan macaamiisha bankiyada Soomaaliyeed u caddeynayaa: 1. In Bankiga Dhexe yahay hay’adda u xilsaaran shati-siinta iyo korjoogteynta bankiyada dalka ka shaqeeya oo dhan. 2. In aysan jirin wax dacwad ama eedayn ah oo laga soo gudbiyay bangi ka mid ah Bankiyada dalka. 3. Bankiga Dhexe ee Soomaaliya wuxuu ku boorrinayaa warbaahinta dalka iyo kuwa dibeddaba (gaar ahaan Baraha Bulshada), in ay ka fogaadaan faafinta xog aan xaqiiqaada ku salaysnayn. Wararka ku saabsan bankiyada iyo shirkadaha maaliyadda ee dalka waxaa laga soo xigan karaa ilaha rasmiga ah, sida Bankiga Dhexe.
Madaxwayne Farmaajo”Calanka Somaaliyeed wuxuu ka tarjumayaa Qarannimada, Gobannimada iyo wadajirka Shacbiga”
Muqdisho, Oktoobar 12, 2020:(SONNA)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda Maalinta Calanka ee 12-ka Oktoobar wuxuuna Alle naxariis uga baryay dhammaan halyeeyadii naftooda u hurey jiritaanka dowladnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha wuxuu dhanka kale tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ay naf iyo maalba u hureen sidii ay u gaari lahaayeen himiladooda Qarannimo, safka horana uga gali lahaayeen shucuubta iyo dalalka xorta ah ee leh calan iyo carro gobanimo ay dadkoodu ugu nool yihiin.
“Maanta waa maalin wayn,Waxa ay ku beegan tahay markii 66 sanno ka hor la yagleelay calanka Soomaaliyeed oo ka turjumaya Qarannimada, Gobonnimada, Midnimada iyo Wadajirka Shacabka Soomaaliyeed oo halgan dheer u soo galay sidii ay u hanan lahaayeen xornimadooda iyo talada dalkooda, iyaga oo ku tilmaaman calan iyo carro xor ah.”sidaana waxaa yiri madaxwayne Farmaajo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u midoobaan xoojinta dowladnimadooda, iyaga oo meel uga soo wadajeesanaya argagixisada Alshabaab ee caadaysatay daadinta dhiigga Shacabkeenna Soomaaliyeed iyo burburinta dalka.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu carabka ku adkeeyay guulihii taariikhiga ahaa ee sanadihii la soo dhaafay ay Dowladda Federaalka Soomaaliya ku xaqiijisay madaxbannaanida dalka, midnimada iyo soocelinta kumanaankii dhallinyarada ahaa ee ku dhibaataysnaa xabsiyada shisheeye, tallaabooyinkaas oo kor u qaaday qabka iyo qarannimada dadka Soomaaliyeed.
Previous articleAl-Shabaab oo weerar culus ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada Itoobiya
Next articleMadaxweyne Maxamed Farmaajo oo Baaq u diray shacabka Soomaaliyeed
XOG: Xafiiska RW Rooble oo wada qorshe ka dhan ah Xildhibaanada ka careysan Xukuumaddiisa
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Xafiiska Ra’iisal wasaare Rooble ayaa ka dalbaday Xildhibaanada laga dhigay Wasiirada in midkiiba uu keensado ilaa iyo 5-Xildhibaan si codka kalsoonida loo siiyo xukuumadda cusub, maadama cabsi xooggan ay ka jirto qorshe ay xildhibaanada ku diidan yihiin ansixinta Xukuumadda. Mid ka mid ah Xildhibaanada laga dhigay Wasiirada ayaa si hoose inoogu sheegay iney jiraan dhaq dhaqaaq ay wadaan qaar ka mid ah Xildhibaanadii ku hungoobay iney ka mid noqdaan Xukuumadda cusub, kuwaas oo marar badan raadiyay, balse heli waayay. ” Ra’iisal wasaaraha ayaa nagu wargeliyay inaan keensano mid san xildhibaan si codka kalsoonida loo siiyo Xukuumadda cusub, Haa cabsi xooggan ayaa ka jirta in Xildhibaanada golaha shacabka ansixin waayaan Wasiirada,” ayuu yiri mid ka mid ah Xildhibaanada loo magcaabay Wasiir ku-xigeen. Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay Wasiirada cusub ayaa Xildhibaanada golaha shacabka ka dalbaday iney codka kalsoonida siiyaan Wasiirada cusub si loo dardar geliyo howlaha muhiimka ah ee horyaala waqtigan kala guurka ah. Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo magacaabay Wasiiro ay qeyb ka yihiin Xildhibaano balse, laga soo tagay Xildhibaano badan oo horay Wasiiro u ahaa, kana tirsanaa Xukuumadii Kheyre. Todobaadka soo socda ayaa lagu wadaa in Xukuumadda cusub la horgeeyo Xildhibaanada golaha shacabka xilli wal wal badan uu ka jiro qaabka loo ansixinayo. Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp
(Barcelona) 22 Okt 2020. Sida uu sheegay Tababare Arsene Wenger, Kabtan Lionel Messi ayaa ka hor tagaay Antoine Griezmann inuu isku muujiyo kooxda kubadda cagta Barcelona. Waxa uu Griezmann ku guuldarreystay inuu qaab ciyaareed fiican soo bandhigo isagoo ka garab ciyaaraya Lionel Messi tan iyo markii uu adduun dhan 120 milyan oo euro uu kaga soo dhaqaaqay dhinaca Atletico Madrid. Wuxuu ahaa bedel aan la isticmaalin kulankii ay Barcelona 5-1 kaga adkaatay Ferencvaros ee Champions League, sidoo kale Griezmann ayaa ku guuldareystay inuu shabaqa soo taabto afar kulan oo uu saftay La Liga xilli ciyaareedkan. Intaas kaliya kuma eka ee xiddiga reer France ayaa kaliya helay hal darbo oo uu goolka ku bartilmaameedsaday, isagoo aan wax fursad ahna abuurin. Dhinaca Messi isagu hal gool ayuu dhaliyey horyaalka, laakiin xiddiga lixda goor ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or ayaa loo diiwaan geliyey inuu 7 darbo goolka ku bartilmaameedsaday, halka uu lix fursadood u abuuray saaxiibadiisa kale ee kooxda. Yeelkeede, tababarihii waqtiga dheeraa ee kooxda Arsenal, Arsene Wenger ayaa rumeysan xiddiga ay isku Waddanka yihiin ee Griezmann inuu dhib ku qabo inuu garoonka la galo Messi, maadaama weeraryahanka reer Argentine uu ka ciyaaro booska weerarka dhexe oo ah boos uu jecel yahay xiddiga reer France. Wenger oo arrintaas ka hadlayey ayaana u sheegay beIN Sports: “Inuusan ka ciyaareynin booskiisa saxda ah waxay adkayn doontaa xaaladdiisa muddada dheer” “Bilowgii, ninkaan uu aqbalay taas, laakiin haddii aan tiisa loo yeelin muddada dheer islamarkaana uu dareemo in booska uu haatan ka ciyaarayo uusan ku muujin karin awooddiisa, wuxuu noqon doonaa mid niyadda ka dhinta. “Maanta waa qasab inuu ka ciyaaro booska weerarka dhexe, sababtoo ah waa madaale, baasaskiisana waa kuwa dhameystiran, halis ayuu ku noqon karaa baaska ugu danbeeya isagoo dhalinaya goolal “Laakiin cabaqad ayaa hortaagan, sababtoo ah ciyaartiisa waxay soo galeysaa booska Messi” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey Wenger. Gool FM. Let’s block ads! (Why?)
Jurgen Klopp oo Aad uga Naxay Dhaawac Soo Gaadhay Sadio Mane
October 22, 2020 | Published by: yaska Xiddiga Liverpool ee Sadio Mane ayaa la beddelay bilowgii qaybta dambe ee kulankii xalay ay Liverpool 1-0 dirqi ahaa kaga adkaatay Ajax, Waxaana markii uu bannaanka u baxay lugta lagaga xidhay baraf si bararku uga dhaco, taas oo ay u dheerayd in laacibkani uu xogta dhaawaciisa sii siiyey tababareyaasha ka hor intii aanu fadhiisan. Arrintan oo walaac ku keentay tababare Klopp iyo jamaahiirta kooxdaba, waxa uu tababaruhu qiray in Sadio Mane uu ciyaarayay isaga oo lugtiisu ‘dhimatay’ kooxdiisana uu guusha u raacinayay. Tababare Klopp ayaa go’aansaday in daqiiqaddii 60aad uu wada beddelo Sadio Mane, Mohamed Salah iyo Roberto Firmino oo hal mar garoonka ka wada baxay iyadoo ay waliba kooxdiisa saaran tahay cadaadis badan oo kaga imanayey Ajax oo nasiibku diiday. Reds oo ay Sabtidii ka dhaawacmeen Virgil van Dijk oo inta xili ciyaareedka ka dhiman maqnaanaya, Thiago Alcantara iyo Jol Matip ayaa walaacu galay markii Sadio Mane lugta lagaga xidhay baraf, hase yeeshee Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyey in dhaawacani sahlan yahay. “Lugta Sadio Mane waxay ahayd mid dhimatay (xanuun hayo) maalmihii ugu dambeeyeyba, waxaanu la tacaalayay xanuun ka hayay aaggaas. Taasi waa sababta ay wali u tahay xanuun kaliya mana jirto dhibaato kale. Marka aanu ciyaarayna waxa uu isasaaraa baraf.” Ayuu yidhi Jurgen Klopp. Sadio Mane ayaa sabab u ahaa guusha Liverpool, waxaana daqiiqaddii 35aad kubbad uu garabka bidix kasoo jabiyey isku qabtay Nicolas Tagliafico, taas oo noqotay goolka guusha u horseeday. Jamaahiirta Liverpool ayay layaab ku noqotay in shaxda koowaad uu kusoo bilowday Curtis Jones isla markaana uu kaydka galay Jordan Henderson oo daqiiqaddii 45aad lasoo raaciyey beddel ahaan. Jurgen Klopp oo arrintan ka hadlay ayaa yidhi: “Waxay ahayd xeelad. Dhakhaatiirta ayaa noo sheegay in Hendo aanu kusoo bilaaban karin, waxayse noo xaqiijiyeen in 45 daqiiqadood uu ciyaari karo. Waa taas sababta aanu Hendo u keenay, Kaddib waxa aanu doonaynay inaanu ku ciyaarno khibrad iyo khad dhexe oo ugu yaraan waqti soo wada ciyaaray, taas oo ku caawinaysa kulamada noocan oo kale ah.” Saddexlayda afka hore ee MSN (Mane, Salah iyo Firmino) ayaa iyagana go’aankii beddelkooda ee halka mar uu ku wada saaray uu tababaruhu soo qaaday, waxaanu yidhi: “Saddexda afka hore, waxaad arkaysay inay tahay ciyaar adag, waxaana muhiim ahaa in hab difaac loo guuro, haddii aad taa samaysana waxaad ku guuleysanaysaa kubadda kaddibna waxaad helaysaa fursad weyn oo dhinaca weerarka ah. LA WADAAG ASXAABTAADA
Kulamo ka tirsan Champions League-ga oo xalay la cayaaray
HALBEEG – Kulamo waaweyn oo katirsan Champions League-ka ayaa xalay la cayaaray, waxaana ku hardamay dhowr kooxood. Kulamadii ugu muhiimsanaa ee la cayaaray waxaa kamid ahaa: Bayern Munich Vs Atletico Madrid, kulankani waxaa loo awood sheegtay naadiga Atletico oo looga adkaaday 4-0. Kooxaha Manchester City iyo Fc Porto ayaa iyaguna is arkay waxana 3-1 ku badisay Manchester City. Sidoo kale Liverpool iyo Ajax ayaa wada cayaaray, waxaa 1-0 ku adkaatay Liverpool, waxaana xusid mudan in Ajax goolka ay iyagu iska dhaliyeen. Ugu dmabeyn kooxda Real Madrid ayaa wajahday Shakhtar Donetsk, Real ayaa looga adkaaday 3-2. Post Views:22 Related Let’s block ads! (Why?)
Pro Abyan oo Ka Hadlay Masuuliyiinta Laga Saaray Xisbi Xaakinka Kulmiye
October 22, 2020 | Published by: yaska Hargeysa (OWN) – Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID ayaa ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay Shirweynihii Afraad ee Xisbul-xaakimka Kulmiye iyo siyaasiyiinta laga saaray markii Xisbiga dib u habaynta lagu sameeyay. Musharraxa Madaxweyne ku-xigeenka ee Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Prof. Axmed Cabdi Muuse ayaa sheegay inay dhici karto isla-markaana hore u dhici jirtay in Siyaasiyiinta ka cadhoodo Xisbi ay tagaan Xisbi kale, maaddaama oo Xisbiyada Somaliland isku mid yihiin, laakiin aanay xilligan jirin wax wada-hadal ah oo u socda Hoggaanka xisbiga UCID iyo Siyaasiyiin uu ka mid yahay Maxamuud Xaashi Cabdi. Prof. Abyan oo u warramay Telefiishanka Saab ayaa ugu horrayn ka hadlay ruxankii siyaasadeed ee uu sababay Shirweynihii 4-aad ee Xisbul-xaakimka Kulmiye, Waxaanu yidhi “Wax inoo muuqdaa way jiraan, in Ruxan siyaasadeed uu jiro oo Xisbigii Kulmiye kala hufid iyo kala haadin lagu sameeyay oo Ragna bannaanka loo tuuray, Ragna ay ku soo hadheen, wayna dhici jirtay oo Axsaabta siyaasiga ahi waa isku wada mid oo Ninkii mid ka cadhoodaa mid kale ayuu tagi jiray, Laakiin imika waxaanu hubno ama aan kuu sheegayo oo Wada-hadallo ah oo u socda Xisbiga UCID iyo Siyaasiyiin kale oo ka timid Kulmiye ma jirto, ama siyaasigaa aad Magacowday ha noqdo (Maxamuud Xaashi) ama siyaasiyiin kale ha noqoto.” Abyan waxa kale oo uu sheegay in aanay xilligan jirin wax wada-hadallo ah oo u socda siyaasiyiinta uu Maxamuud Xaashi Cabdi ka mid yahay ee Cadhada kaga maqan Xisbiga Kulmiye, balse ay sugayaan “Waa wax dhici kara, wayna dhici jirtay, Waanuna sugaynaa Wakhtigeeda Haddii Ilaahay idmo (Inay Wada-hadallo noo furmaan Siyaaisyiintaa)…” ayuu yidhi Axmed Cabdi Muuse (Abyan), Waxaanu intaa sii raaciyey in hawlihii u diyaar-garowga doorashadu si wanaagsan u socdaan. LA WADAAG ASXAABTAADA
XOG: Xiriirkii Qoor Qoor & Lafta-gareen kala dhaxeeyay Villa Somalia oo Go’ay + Sababta
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Tan iyo markii ay doorashada ka dhacday iyo ka hor abaabulkeedaba maamul gobaleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug, waxaa aad loo hadal hayay in labadaas maamul hogaamiyaashooda ay yihiin shaqsiyaad meesha la geestay oo ku xiran Villa Somalia. Warar soo baxayay todobaadyadii la soo dhaafay ayaa sheegay in si toos ah u kala go’ay xiriirkii gaarka ahaa ee u dhexeeyay Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynayaasha kala Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen. Labadaan Madaxweyne oo si toos ah u fulin jiray rabitaanka Villa Somalia ayaa hada ku xirtay maamul gobaleedyada Jubaland iyo Puntland, waxeyna aragti mid ah ka qaateen fulinta heshiiskii doorashada Soomaaliya ee lagu gaaray Muqdisho. Ilo-wareedyo muhiim ah, ayaa noo sheegay in dhinacyadaan ay isla qabaan go’aan mid ah oo ay ka siman yihiin dhamaan maamul gobaleedyada dalka, kaas oo ah in marka hore Villa Somalia fuliso heshiisyo hoose oo aan dadweynaha loo soo bandhigin oo ay ku gareen Muqdisho, waxaana heshiisyada ka mid ah arrinta gobalka Gedo iyo kuwa kale. Qoor-Qoor, Lafta-gareen iyo Waare, waxay ahaayeen garbaha dowladda federaalka Soomaaliya waxaana kulan kasta lagu tirin jiray in ay jiraan dhinaca dowladda, hase yeeshee kulankii dhowaan ka dhacay Muqdisho ayey xiriir toos ah ula sameeyeen maamulada Jubaland iyo Puntland, waana sababta ay ilaa hadda usoo magacaabi la’yihiin xubnihii ku matali lahaa guddiga doorashada Soomaaliya. Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp
Updated on October 22, 2020 9:30 am